ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း Zaria မြို့၊ နိုင်ဂျီးရီးယား (၂၀၁၇) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn
ပင်မစာမျက်နှာ > Vol 3, အဘယ်သူမျှမ2(2017) > Anthony OLAJIDE
OREBIYI, Anthony OLAJIDE, OREBIYI, KEHINDE ယောဟနျ
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းမှဆယ်ကျော်သက် "ထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်. လူ့အဖွဲ့အစည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိကြီးထွားလာပါပြီ။ ဥပမာ, Arulogun (2002) ဆင်ဆာပိတ်ထားသောဝက်ဆိုက်များပေါ်မှအင်တာနက် contents တွေကိုသုံးစွဲသူများကနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အထူးသဖြင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကွဲပြားအမျိုးအစားများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာအပေါ်ရပါလိမ့်မယ်သောဖြစ်နိုင်သောအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
Araoye MO ကို (2004) ။ နိုင်ဂျီးရီးယားရှိအမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် - HIV / AIDS နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတ၊ သဘောထားနှင့်အပြုအမူ။ J Comm Med & Prim Hlth စောင့်ရှောက်မှု။ ; 6,2: 23-29
Arulogun, O. (2002) ။ Ibadan မြောက်အမေရိကဒေသခံအစိုးရဧရိယာအိုယိုပြည်နယ်, Ibadan အတွက်လူငယ် Persons ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: ဆေးပညာကောလိပ်, Ibadan တက္ကသိုလ်။
ဘာဘရာ, SM, ဒံယေလ, ခ, ယ်စလီ HC & Binka, P. (1999) ။ ဂါနာမြောက်ပိုင်း Kassena-Nankana ခရိုင်အတွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ပြောင်းလဲခြင်းသဘောသဘာဝ။ မိသားစုစီမံကိန်းလေ့လာရေး, 30 (2), 95-111
Bandura, အေ, Ross ကဃနှငျ့ Ross, SA "Vicary အားဖြည့်ခြင်းနှင့်တုပသင်ယူမှု။ " ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 1963 (67),6(601 ။ ) - 607
Banwo ။ O. (2014) ။ နိုင်ဂျီးရီးယား, သို့သျောလညျးအငျတာနကျ၏အကျိုးကျေးဇူးများကကြိုးတန်ဆာဆင်ဖို့။ http://dailyindependentnig.com/2014/11/nigerians-yet-harness-benefits-internet-ope- banwo /
Benson, TW (1994) ။ ဆက်သွယ်ရေးပညာရှင်များအဘို့အအီလက်ထရောနစ်ကွန်ယက်ကိုအရင်းအမြစ်များကို။ ဆက်သွယ်ရေးပညာရေး, 43, 120 ။
Bern, ဂျေနှင့် Huberman, ခ (1999) ။ ဥရောပဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်တာဝန်ဖို့ချဉ်းကပ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: လူငယ်များအတွက်ထောက်ခံသူများ။
Bledsoe, CH နှင့် Cohen ကို, ခ (1993) ။ ခွဲများဆာဟာရအာဖရိကအတွက်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမွေးဖွား၏လူမှု Dynamics ကို။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမျိုးသားအကယ်ဒမီနှိပ်ပါ။
Briggs, Tonye အန်တိုနီ။ (1995) ။ အသိပညာ, သဘောထားနှင့်ဆိပ်ကမ်း-Parcourt, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက် Kalabari ပြည်သူ့အကြားလိင်ပညာရေးအလေ့အကျင့်။ Abdool Karaim အဘိဓါန်, ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုရသေးသောအမ်ဖီးလ်စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း။ ဆိပ်ကမ်း-Harcourt, ဆိပ်ကမ်း-Harcourt, နိုင်ဂျီးရီးယားတက္ကသိုလ်။
ဘရောင်း, ဂျေနှင့်သည် L'Engle, K. (2009 ။ ) လိင်သဘောထားများနှင့်အမေရိကန်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာစောစောဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုထိတွေ့ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 36 (1), 129 - 151
ဘရောင်း, အက်စ်အက်စ်နှင့် Eisenberg, အယ်လ် (Eds ။ ) ။ (1995) ။ အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်များ: မရည်ရွယ်သောကိုယ်ဝန်နှင့်ကလေးများနှင့်မိသားစုများ၏ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်း။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမျိုးသားအကယ်ဒမီစာနယ်ဇင်း
Bryne, ဃနှင့် Lamberth ဂျေ (1970) ။ ညစ်ညမ်းသောနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပေါ် "ဒီလိင် arousal အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, အကဲဖြတ်တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်နောက်ပိုင်းအပြုအမူ" ဟုအဆိုပါကော်မရှင်နည်းပညာအစီရင်ခံစာ။ Vol VIII, 68 - 96 ။
Calder, အမ် (2004) ။ ကလေးသူငယ်လိင်အလွဲသုံးမှုနှင့်အင်တာနက်: အ New Frontier ဖြေရှင်းရန်။ Lyme Regis (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း): စယ်အိမ်ထုတ်ဝေရေး။
Cooper က, အေ, McLoughlin, IP နဲ့ကမ့်ဘဲလ်, KM (2000) ။ ဆိုက်ဘာစပေ့ထဲမှာလိင်: အ 21st ရာစုနှစ် Update ကို။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ,3(4), 521-536 ။
Cooper က, အေ (1998) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ CyberPsychology နှင့်အပြုအမူ, 1 (2), 187-193
CTF ။ (2002) ။ ကလေးကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအပေါ်အနာဂတ်တစ်ဦးကအစီရင်ခံစာချိတ်ဆက်ထားပြီး။ ပြည်သူ့အသံလွှင့်က်ဘ်ဆိုက်သည်ကော်ပိုရေးရှင်းမှရယူရန် cpb.org/ed/resources/connected
Creswell, ဂျေ (1994) ။ သုတေသနဒီဇိုင်း: အရည်အသွေးနှင့်ဘက်စုံချဉ်းကပ်မှု။ sage, လန်ဒန်
CyberAtlasStaff, (2003) .PopulationExplosion, http: //cyberatlas.internet.com/big_picture/geogra phics / ဆောင်းပါး /0,, 5911_151151,00.html
ဆိုက်ဘာ-Atlas န်ထမ်းများ, (ဇွန်လ 16, 2003) ။ "http://cyberatlas.internet.com/big_picture/traffic_patterns/article/2003,,0_5931.h tml, အင်တာနက်အသုံးပြုမှု Stats ကတော့ 2222541,00 နိုင်ပါစေ
ဒံယလေသ Orr နှင့်ဂျိုးဇက် Ferrigno-Stack ။ (2001) ။ "World Wide Web ကိုအပေါ် Childproofing: လူကြီးက Web-ဆာဗာများ, တစ်စစ်တမ်း" Jurimetrics 41 (4): 465-475
Davis က Ke နှင့် Braucht Gn (1970) ။ ညစ်ညမ်းသောနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပေါ်ကော်မရှင်အပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, စာလုံးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Deviance, Techincal အစီရင်ခံစာမှ exposure ။ www.protectkids.com/effect/harm/htm
ဒစ်ခ်, တီနှင့်ဟားဘတ်, အယ်လ် (2003) ။ လူငယ်, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အင်တာနက်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအတွက်ပြဿနာများကို။ အကယ်ဒမီအမျိုးသားအစည်းအရုံးနှင့်တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်မှထုတ်ဝေ။ ဆောင်းရာသီ, 2003
Donald, အေဒီ (1989) ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏နယူးနိုင်ငံရေး။ မင်နီဆိုတာ: မင်နီဆိုတာဥပဒေကျောင်းတက္ကသိုလ်။ p 34-35, 56-57
Donna ဆန် Hughes (2001) ။ ဘယ်လိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံထိခိုက်နစ်နာမှုကလေးများ။ www.protectkids.com/effect/harm/htm မှရယူရန်
Dolf Zillmann နှင့် Jennings Bryant ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အတွက် (1984) "ညစ်ညမ်းဖို့အကြီးအကျယ်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ" (နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း, 1984)
Eboh, C. (2009) ။ လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးသုတေသန။ အသုံးချဘောဂဗေဒ, Enugu များအတွက်အသုံးချ Institute မှ။
Emeozor, အီး (2005) ။ NGO အဖွဲ့က de HIV ပိုးဆန့်ကျင်သည်အင်တာနက်ပါဝါ ploys ။ Daily သတင်းစာယာ www.sunnewsonline.com/webpages/features/suntech/2005/mar/09 မှရယူရန်။
နိုင်ဂျီးရီးယားကျန်းမာရေးဖက်ဒရယ်။ (2006) ။ အမျိုးသားအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစစ်တမ်း၊ (NARHS) ၂၀၀၅
ဖက်ဒရယ်ကွန်ယက်ကောင်စီ။ (1995) ။ အင်တာနက်ကိုလစဉ်အစီရင်ခံစာ။ www.cs.columbia.edu/- hgs / အင်တာနက် / definition.html
Freud, အက်စ် (1961) ။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်၎င်း၏မကျေနပ်မှု။ နယူးယောက်: Norton & Company Inc.
ဂယ်ရီ RB (1995) ။ အဆိုပါ Centerfold Syndrome: ဘယ်လိုယောက်ျား Objectification ကျြောလှားနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်အတူနီးစပ်ခြင်းအောင်မြင်ရန်နိုင်သလား။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို: Jossy-ဘေ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း။
Gebhard, P. (1977) ။ အခြေခံလိင်အချက်အလက်များ၏ဝယ်ယူ။ လိင်သုတေသန 13 ၏ဂျာနယ်, 148-169 ။
Gotfried .k ။ (2010) ။ "porn ၏အရေးပါမှု" ။ ဘန်ကောက်ပို့စ်။ ရယူရန်: ဇန်နဝါရီလ 17, 2014 ။
Ingram တီ (2013) ။ ညစ်ညမ်း defining: ဟာမွေးရာပါချောနှင့်စေးကပ်-concept ကိုချ pin မှတစ်ဦးကြိုးစားကြပါတယ်။ http://www.themanitoban.com/2013/11/defining-pornography/17831/
Irvine, ဂျေ (2004) ။ လိင်အကြောင်းပြောဆို: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပညာရေးကျော်တိုက်ပွဲ။ ဘာကလေ: ကယ်လီဖိုးနီးယားစာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်။
Jill Manning၊ (၂၀၀၅)“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ၏လက်ထပ်ခြင်းနှင့်မိသားစုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုကြားနာခြင်း” အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကြားနာခြင်း - ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆပ်ကော်မတီ၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ၊ တရားစီရင်ရေးကော်မတီ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၅ http: //www.judiciary ။ senate.gov/hearings/testimony.cfm?id=e2005f10e2005e655f9d a2809c5476862dc & wit_id = e735f10e87e655 9f2809da5476c62dc-735-10 (ဝင်ရောက်ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂) ။
John C. Okolo SN Isichei .C ။ (2013) ။ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ဂျိုရှိအလယ်တန်းကျောင်းများရှိဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် HIV ကူးစက်မှု။ နိုင်ဂျာ J ကို Paed 2014; 41 (2): 86 - 89
ခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက။ (2001) ။ ဘယ်လိုလူငယ်များကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပါ။ Menlo Park ။ (CA)7ခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက: မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Rx.com ။
Kanuga, အမ်နှင့် Rosenfeld, WD (2004) ။ ဆယ်ကျော်သက်လိင်နှင့်အင်တာနက်: ကောင်းမွန်သော, ဆိုးများနှင့် URL ကို။ J ကိုကလေးဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Gynecol; 17 (2): 117- 24 ။
ကယ်လီ, gf (2004) ။ လိင်ယနေ့တွင်: အဆိုပါလူ့အမြင်။ ဘော်စတွန်: McGraw ဟေးလ်။
Kerstin ။ အက်စ် (2012) ။ ဂျာမနီမှာနေတဲ့လူငယ်လူကြီးများအကြားအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ Antecedents နှင့်အကျိုးဆက်များ။ နယ်သာလန်: Twents, Enschede တက္ကသိုလ်။
Kraut, R. , ပက်တာ, ဂျေနှင့် Lundmark, V. (1998) ။ အင်တာနက်ကဝိရောဓိ: လူမှုရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာကိုလျော့နည်းစေမယ့်လူမှုရေးနည်းပညာ? အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်, 539, 1017-1031 ။
Kunkel, ဃ, ကိုင်တွယ်, KM နှင့် Farinola WM (1999) ။ တီဗီပေါ်တွင်လိင်: အခိုင်ဆာမိသားစု-Foundation မှတစ်ဦးနှစ်နှစ်တကြိမ်အစီရင်ခံစာ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အဆိုပါဟင်နရီဂျေခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက။
Levinson, အေနှင့် Konrad O. (1973) ။ အနုပညာအမျိုးသားပြခန်းမှအစောပိုင်းအီတလီအက္ခရာ တင်. ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အနုပညာအမျိုးသားပြခန်း။ စစ။ 526-27 ။
Lindgrent ဂျိမ်း (1993) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ .Defining ။ Pennsylvania ပြည်နယ်ဥပဒေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၏တက္ကသိုလ် [Vol ။ 141: 1153 ။
Long, OB နှင့် Long, အက်ဖ်အေ (2004) ။ အင်တာနက်ကို spam နည်းပညာအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ စက္ကူနိုင်ဂျီးရီးယား Polytechnic ၏ပညာရေးဆိုင်ရာန်ထမ်းများ၏ 5th နှစ်ပတ်လည်အမျိုးသားညီလာခံ, Bida, နိုင်ဂျီးရီးယားမှာပေးအပ်သည်။
Lubans, ဂျေ (1998) ။ "ဘယ်လိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကိုအသုံးပြုဖို့ပထမဦးဆုံးနှစ်နှင့်နှင့် ပတ်သက်. အင်တာနက်ကိုအရင်းအမြစ်များကို": www.lib.duke.edu/staff/orgnztn/lubans/docs/1styear/firstyear.htm ။
McCormack, တီ (1978) ။ "။ မီဒီယာသုတေသနအတွက် Machismo: အကြမ်းဖက်မှုအပေါ်သုတေသနနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏တစ်ဦးကဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်း" လူမှုရေးပြဿနာများ, 25, (5), 544 - 555 ။
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် Unplanned ကိုယ်ဝန် (2008) လိင်နှင့်နည်းပညာအောင်ကာကွယ်နိုင်အမျိုးသားကင်ပိန်း: ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လူကြီးများ၏စစ်တမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ရလဒ်များ; http://www.thenationalcampaign.org/sextech/pdf/sextech_summary.pdf ။ ဝင်ရောက်: ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2011 ။
အမျိုးသားသုတေသနကောင်စီ။ (2002) ။ လူငယ်, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အင်တာနက်။ ) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီအမျိုးသားအကယ်ဒမီနှိပ်ပါ။
net-လုံခြုံ-လေးတွေ။ (2003) ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ http.//www.nap.edu/netsafekids/pp_whatis.html ။